FreeCAD, ihe ngosi ihe eji emeghe ihe na ihe eji emeghe 3D modeler | Site na Linux
FreeCAD bu ihe eji enyere komputa aka (CAD) 3D Parametric nweere onwe ya ma mepee ya ma wepụta ya n'okpuru akwụkwọ ikike LGPL v2 +. Ejiri ya rụọ ọrụ na injinịa yana rụchaa ngwaahịa, mana ọ na-ekwukwa ọzụzụ ndị ọzọ, gụnyere ịhazi ụlọ ma ọ bụ mpaghara ọrụ ndị ọzọ na injinia, mbipụta 3D, nyocha ngwaahịa, wdg
FreeCAD nwere àgwà yiri nke Catia, SolidWorks ma ọ bụ Solid Edge, nke na-enye ya ohere ịkesa ya dịka CAD / CAM, CAE na PLM sọftụwia.
FreeCAD 0.18.4 bụ nke kachasị ọhụrụ nke akụrụngwa ewepụtara na Ọktọba 2019. Ugbu a, FreeCAD dakọtara nke ọma na Windows, Linux / Unix na Mac OSX na otu ọdịdị, njirimara na nyiwe niile, dịka ndị otu mmepe si kwuo.
Jiri ọba akwụkwọ dị iche iche mepere emepeNdị a gụnyere Open Cascade Technology (OCCT), isi CAD; Coin3D, a 3D ndịna-emeputa mmepe Toolkit, wdg
FreeCAD mbipute 0.19 na-echere ntọhapụ, mana akwadoro maka afọ a. Dabere na ndị na-emepụta ya, FreeCAD na-enye gị ohere ịmepụta ihe ọ bụla ịchọrọ, ọkachasị ihe ndị dị adị n'ezie na nha ọ bụla.
Ngwa ahụ nwere isi geometry nke dabere na teknụzụ Open CASCADE que na-enyere arụmọrụ 3D dị mgbagwoju anya n'ụdị ọdịdị dị mgbagwoju anya, na nkwado nke ala maka echiche dịka nnọchite nke oke (brep), akụkụ na spline surfaces (nurbs) usoro ndị enweghị ụdị edo edo, ọtụtụ ngalaba jiometrị, ọrụ Boolean na iwu, na nkwado nkwado EPdị usoro na IGES.
Na FreeCaD ihe niile bụ ntọala obodo, nke a pụtara na ọdịdị ya nwere ike ịdabere na ihe onwunwe ma ọ bụ ọbụna dabere na ihe ndị ọzọ. A na-agụgharị ngbanwe ọ bụla na achọ wee zọpụta ya site na iji nchịkọta "undo / redo", ụdị ihe ọhụrụ nwere ike ịtinye ngwa ngwa na mmemme zuru oke na Python.
Ọzọkwa, nwere ihe owuwu modul nke na-enye ohere ịgbatị modular ịgbakwunye arụmọrụ na isi ngwa. Mgbatị nwere ike ịdị mgbagwoju anya dị ka ngwa ọhụrụ ọhụụ edere na C ++ ma ọ bụ dị ka ederede Python ma ọ bụ nnukwu ndekọ ederede.
Na-enye gị ohere ịbubata na mbupụ na ụdị ọkọlọtọ dị ka ntụpụ ụkwụ, IGES, OBJ, STL, DXF, SVG, STL, DAE, IFC ma ọ bụ Gbanyụọ, NASTRAN, VRML na mgbakwunye na usoro nnwere onwe FCStd nke FreeCAD. Ogologo ndakọrịta n'etiti FreeCAD na otu faịlụ faịlụ nwere ike ịdị iche, ebe ọ dabere na modulu na-eme ya.
O nwere ihe mgbochi na-egbochi ya, nke na-enye gị ohere ịdepụta ụdị 2D nwere oke jiometrị. Enwere ike iji ha dị ka ntọala maka iwu ihe ndị ọzọ na FreeCAD.
Nakwa yana modulu dị iche iche, dịka nkedo robot nke na-enye gị ohere ịmụọ mmegharị nke robot na eserese eserese.
Usoro ntanetị nke teknụzụ nwere nhọrọ maka nkọwa zuru ezu, ele echiche nke akụkụ, akụkụ na ndị ọzọ, na-enye gị ohere iwepụta echiche 2D nke ụdị 3D dị adị. Modul ahụ na - ewepụta SVG ma ọ bụ PDF faịlị ndị adịla njikere ibupụ.
Mbadamba nsụgharị nke nwere ike ibupụ ihe 3D maka nsụgharị na ngwaọrụ nsụgharị nke mpụga. Maka ugbu a ọ na - akwado povray na LuxRender, mana ekwesịrị ịgbatị ya ndị ọzọ na - eme ihe n'ọdịnihu.
obe-ikpo okwu: FreeCAD na-arụ ọrụ ma na-akpa otu ihe na Windows, Linux / Unix, macOS na nyiwe ndị ọzọ;
Ngosipụta eserese zuru ezu: FreeCAD nwere eserese eserese zuru ezu dabere na usoro Qt, yana onye na-ekiri 3D dabere na Open Inventor, nke na-enye ohere ịme nsụgharị ngwa ngwa nke ọnọdụ 3D na nnweta eserese eserese nke ihe ngosi;
Ọ na-arụ ọrụ dịka ngwa ntinye iwu. Na usoro usoro iwu, FreeCAD na-arụ ọrụ na-enweghị eserese eserese ya, mana ya na ngwaọrụ geometry ya niile. Na ọnọdụ a, ọ nwere obere akara ncheta dị ntakịrị ma nwee ike iji ya, dịka ọmụmaatụ, dị ka ihe nkesa iji mepụta ọdịnaya maka ngwa ndị ọzọ;
Enwere ike ibubata dị ka modulu Python: Enwere ike ibubata FreeCAD n'ime ngwa ọ bụla nwere ike ịgba ọsọ Python. Dị ka ọ dị n'usoro ntinye iwu, eserese eserese ya adịghị, mana ngwaọrụ geometry niile nwere ike ịnweta;
Echiche Workbench: Na interface FreeCAD, a na-achịkọta ngwaọrụ site na workbenches. Nke a na - eme ka o kwe omume igosipụta naanị ngwa ọrụ ejiri rụọ ọrụ ụfọdụ, na - enyere aka idobe oghere ọrụ ma zaa ngwa ngwa, na iji ngwa ngwa ngwa ngwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » FreeCAD, ihe ntanye na-emeghe ma na-emepe emepe 3D modeler
Backsda na-akwado TikTok na Oracle